Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Video ku iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4
Waxaan ku soo watay video ah wiilkayga aan iPhone 6 iyo si qalad ah u tirtiray. Ma suroobi karaa waddo si aad u hesho dib? - Helen
Si aad u isticmaala iPhone, waayo-aragnimo aanay tani waa dhif. hal dhinac, iPhone kana soobixiya wax waayo-aragnimo user weyn oo wanaagsan, laakiin dhinaca kale, khasaaraha xogta ha users khatar weyn. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad hore u samaysay tallaabooyinka saxda ah, waxaa jira yimaado fursad wanaagsan oo kaa caawinaya in aad ka soo kabsado sawirada iPhone ama video tirtiray. Wondershare Dr.Fone Ee macruufka awood u in aad ka bogsato ka videos tirtiray si toos ah uga iPhone, Lugood iyo gurmad iCloud.
Saddex Solutions inuu ka soo kabsado tirtiray Videos on iPhone
Siinayaa saddex siyaabood oo dib u soo ceshano lumay videos ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS
Kabsado tirtiray videos liiska camera iyo barnaamijyadooda.
Ceshano sawiro si toos ah uga iPhone iyo gurmad Lugood / iCloud.
Xulo marka hubi iyo soo kabsado videos in tayada asalka ah.
Ceshano badan videos, sidoo kale xiriiro, wac log, fariimaha, sawiro, qoraalo, iwm
Read kaliya oo khatar la'aan.
1: ka iPhone Ladnaansho video
2: Ladnaansho video ka Lugood
3: ka iCloud Ladnaansho video
Qeybta 1: Ladnaansho tirtiray Video si toos ah uga iPhone
Tallaabada 1 Connect aad iPhone in computer ka iyo waxa laga baarayo
Burcad Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer, iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka la cable ah digital. Marka iPhone la ogaado, guji "Advanced Mode" in ay u baddashaan hab iskaanka sare. Markaas raac tilmaan uu furmo in baarista iPhone u videos laga badiyay waxaa ku.
Fiiro gaar ah: hab sare waxa kaliya ee loo heli karo iPhone 4 / 3GS, iPad iyo iPod 1 xiriiri 4 hadda. Haddii aad isticmaasho tusaalayaal kale, sida iPhone 6 ama iPhone 5s, aad si toos ah u iskaan kartaa macluumaadka ku yaal, ama kaliya bedesho xal ee qaybta 2 ama qeybta 3.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray videos ka iPhone
Scan ka dib, dhammaan xogta aad on your iPhone ama laga badiyay ka iPhone waxaa la helay iyo ku qoran qaybaha habaysan. Si aad u hesho videos, hubi Roll Camera, taas oo ka kooban sawiro iyo filimo ka qabsadeen. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto iyo riix Ladnaansho badhanka hoose si ay u dhan badbaadin on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ka sokow soo kabsaday xogta tirtiray ka iPhone, Dr.Fone ee macruufka sidoo kale dhoofin karto xogta aad weli iPhone. Haddii aad rabto in aad dib oo kaliya kuwa aad tirtiray, waxaad nadiifin kartaa natiijada scan adigoo isticmaalaya badhanka on dhexe-sare ee daaqadda in waxyaabaha bandhigay tirtiray kaliya.
Qeybta 2: Sawirka iyo Waraaqda Lugood ee kaabta inuu ka soo kabsado Videos u iPhone
Tallaabada 1 Dooro gurmad qalabka si scan
Marka socda barnaamijka on your computer, guji soo kabsado Lugood ee kaabta File dusheeda, oo aad arki doonaa suuqa kala hoose. Hadda waxaad tahay hore ee files gurmad u qalabka. Kaliya dooro mid ka mid ah aad iPhone oo guji Start Scan Macdan content ka iPhone gurmad file.
Fiiro gaar ah: Tirada files gurmad aad u hesho halkan ku xiran tahay sida badan aaladaha Apple aad synced la Lugood hor.
Tallaabada 2 kabsado tirtiray iPhone videos
Marka scan ay ka badan tahay, gurmad content oo dhan waa la soo saaro iyo sidoo kale soo bandhigay. Waxaad ka eegi kartaa video oo ku jirta qaab .mpeg guud ahaan, oo guji Ladnaansho on menu ugu sareysa si ay u kaydiso on your computer.
Qeybta 3: ceshano Khasaaray iPhone Videos ka kaabta iCloud
Tallaabada 1 Download iyo baarista gurmad iCloud
Inaad doorato soo kabsado iCloud File kaabta ka dib markii ay barnaamijka. Markaas saxiixa in ID Apple aad. Waxaad arki doonaa barnaamijka muujinaya dhammaan iCloud files gurmad in aad xisaabta ku liis. Dooro mid aad rabto in aad soo saaro si ay u soo bixi. Ka dib markii in, aad si toos ah iskaan karaan si ay halkaas ku soo saaro.
Fiiro gaar ah: Marka aad waxan u samaynaysaan, ha aad internet ku xiran.
Tallaabada 2 kabsado tirtiray iPhone videos ka iCloud
Marka scan ka istaago, waxaad eegi kartaa videos in qaybaha Camera Roll iyo App Video. Iyaga Sax iyo guji Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Si looga fogaado badiyay aad video iPhone, gurmad deg-deg ah waa mid aad u muhiim ah oo waxtar leh. Mar kasta oo marka aad ku soo gani videos aad iPhone, ha xasuuso inaad iyaga gurmad on your computer hore.
Badan oo ku saabsan Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Qalabka ay taageerayaan Macluumaadka la heli karo inuu ka soo kabsado
iPad Air, iPad mini bandhigay isha, iPad mini, iPad bandhigay isha, The iPad cusub, iPad 2, iPad 1
iPod xiriiri 5, iPod xiriiri 4
Content Text, Xiriirada, Messages, wac taariikhda, Calendar, Notes, waano, WahtsApp History, Safari bookmark, Documents App
Content Media: Roll Camera, Photo Library, Photo Stream, Voice Deymaha maqan, lifaaqyada Message, WhatsApp Lifaaq, farriinta, App Photos, App Videos
Sidee si ay u helaan Faylal ay ku iCloud
Sida loo isticmaalo ee kaabta iCloud
Jeclaada Messages aad ka ogaato
Sida loo soo celiya tirtiray Qoraallada on iPhone
5 siyaabo oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in computer
Sida loo beddel iPhone Your jaban 4 / 4s Screen
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Video ku iPhone